नेताहरू कहाँ चुके ? : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारनेताहरू कहाँ चुके ?
२०६३ साल ५ मंसिर नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । माओवादीतर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनाका लागि ज्यानको बाजी राखेर लडे र आखिर गणतन्त्र स्थापना गरे । तर, ती व्यक्तिहरू वर्तमान अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीमा र सरकारमा रहँदा पनि जनताले पीडा भोगिरहेका छन् । यसको रहस्य गहिरो छ ।
वर्तमान सरकारलाई केही धेरैले ‘नश्लीय’ भनेका छन्, कम्युनिस्टले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नीति र विचारमा ख्याल पु¥याउनु पर्छ कि पर्दैन ? मानिसले भनेकोजस्तो नैतिक व्यवहारले भएन भनेका छन् । यो अवस्था त्यत्तिकै त सिर्जना भएको होइन पनि । यसको मुख्य कारण नै नेताबाट जनताले धोखा पाउनु हो । त्यसको प्रतिफल पनि उनले आज भोग्दै छन् । गणतन्त्रजस्तो परिवर्तन कसले ल्यायो ? नेता र जनता मिलेर ल्याए । यो कुरा निश्चित सत्य हो ।
तर, जुन क्रान्ति र परिवर्तनका लागि त्याग र शहादत प्राप्त गरे उनैलाई नै बिर्सिएर जीवनमा बेसहारा र अपांग बनाइएको छ । आज उनलाई ‘किन रुन्छस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भन्ने भएको छ । कर्मको फल भोग्दै छन् ।
थोरै उपलब्धिका रूपमा जनताका छोराछोरीले देशको कार्यकारी प्रमुखदेखि सबै उच्च पदमा चैन गर्न पाएका छन् । यसको श्रेय ती नेताहरूलाई गए पनि जनताले भनेको जस्तो भएको छैन । माओवादी र त्यति बेलाको राजतन्त्रबीच जुन युद्ध भयो, त्यो विजय युद्धमा माओवादीका सम्पूर्ण योद्धा पनि श्रेयको भागीदारबाट अलग सम्झनु त्यो जत्तिको अन्याय र विभेद अरू के हुन सक्छ ?
त्यसैले, त्यो युद्धमा जतिले शहादत प्राप्त गरे, त्यत्ति बेला माओवादी सरकारले उनीहरूको सन्तानको जीविकोपार्जनका लागि राम्रो राहत दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । माओवादीले आफ्नो पहिलो दायित्वलाई नै बिर्सी महापाप गर्दै छन् । यसैको फल भोग्दै छन् ।
यो देशको विडम्बना हो । जनतामा विभेद यद्यपि कायमै छ । देशको समृद्धि भनेको जनताको समृद्धि हुनु हो । नेताको समृद्धि मात्र भइरहेको छ । केही विकास हुँदैमा त्यो विकास मानिँदैन । चौतर्फी समानुपातिक विकास खोइ ? मूलवासीउपर उनीहरूको थातथलो, संस्कृतिमाथि नै विकासको नाममा उनीहरूलाई यो सरकारको निर्देशनमा खोकना, पशुपति क्षेत्र आदि ठाउँमा जनताको भावना नबुझी व्यवहार गरिएको छ ।
ठेक्कापट्टा, कमिसन, व्यापार र देशको भूमि अवैध कब्जा गर्नेजस्ता काम नेताहरूबाट भइरहेका छन्
मूलवासीलाई उनीहरूको थातथलोबाट जबरजस्ती उठीवास गराउन खोजिदै छ । जुन कार्य गैरकानुनी हो । यसरी विकासको नाममा देशमा विनाश गर्दै छन् । वर्तमान सरकार सत्यको बाटो जान सक्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक, समानुपातिक, शासन चलाउएर ‘नश्लीय’ आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
जनताप्रति गरिएका बाचा पूरा गर्नुपर्छ । घोषणापत्रअनुसार पहिचानसहितको ११ संघीय प्रदेशको संरचना र जनअधिकार दिन सक्नुपथ्र्यो । जनताले धोका दिएको ठानेका छन् । जनताको नजरबाट नेता र सरकार गिर्न भएन । अझै पनि तिमीमा चेतना नआउनु देशको नै दुर्भाग्य हो ।
कति योद्धाहरूले जुन क्रान्ति र परिवर्तनका लागि त्याग र शहादत प्राप्त गरे उनीहरूलाई नै उनीहरूको जीवन बेसाहारा, अपांग अवस्थामा पुग्दा पनि उनीहरूमाथि आज निर्दयी व्यवहार हुनुमा तिमी दोषी छौ । देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनु तर जनताले दुःख पाउनुलाई परिवर्तन आएको मान्न सकिँदैन ।
दाङ जिल्लाकी बंगलाचुली–२ की कुमारी नेपाली जनयुद्धकी घाइते हुन् । ६ हजार २ सय रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता पाइरहेकोमा त्यो पनि कटाइदियो रे । अब के खाएर बाँच्ने हो ? कसरी छोराछोरी हुर्काउने हो ? आँसुका धारासहित भकानिँँदै उनी भन्छिन्, ‘युद्धका बेला नेताहरूले सबै जिम्मा लिन्छौं भन्थे तर उनीहरू फर्की आउँदैनन् । अब जीवननिर्वाह भत्ता पनि काटिदियो हामी कसरी बाच्ने ?’
त्यस्तै, तुलसीपुर–१० का घाइते भूमिलाल चौधरीको एउटा हात र एउटा खुट्टा चल्दैन । उनको पीडा छ । काम गर्न नसकेको कारण कुनै काम पाइरहेका छैनन् । अर्का घाइते योद्धा भुलबहादुर विकले दायाँ खुट्टा जनयुद्धमा गुमाए । आफ्नो शरीर बर्बाद गरेर आएको गणतन्त्रमा आज आफ्नो स्थान कतै नभेटिँदा उनलाई साह्रै पीडा हुन्छ । नेता सामान्य बिरामी हुँदा विदेश जाने, भव्य महलमा बस्ने, कार चढेर हुँइकिरहने तर हामी झुपडीमा पनि एक मानो खान पाएका छैनौं । वर्षौंदेखि पीडा बोकी बाँचिरहेका छौं । हाम्रा नेताले हिजोको वर्गीय प्रतिबद्धता यति चाँडै किन भुले ? भनिरहेका छन् ।
घोराही–१७ का अर्का घाइते केशव चौधरीको त गिदीमै तीनवटा गोली छन् । गिदी पाकिरहन्छ । चिसोमा तेल र तातोमा पानी हालेर दैनिक स्याहारसुसार गरेर श्रीमती लक्ष्मीले उनलाई अहिलेसम्म बचाइराखेकी छन् ।
निष्ठुरी, निर्दयी नेतालाई कसरी जनताको अभिभावक भनौं ? लक्ष्मीको पीडा छ । हरेक दिन औषधि चाहिरहन्छ । उनले पाउने ६ हजार २ सय औषधि किन्नमै सकिन्छ । गिदीमा गोली छ । जति बेला पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ । श्रीमान्लाई छाडी कतै काममा पनि जान सकिँदैन । जीविका चलाउन गाह्रो भइसकेको छ । दाङमा मात्रै कुमारी, भूमिलाल, भुलबहादुर र केशवजस्तै साढे ७ सय जनयुद्धका घाइतेहरू बस्छन् । त्यसमध्ये पनि गत वर्षसम्म २२ जनाले मात्र जीवननिर्वाह भत्ता पाउँथे ।
अब सबै साढे ७ सय जनालाई नै भत्ता हुनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ । प्रचण्ड ! तपाईंको सरकारले तपाईंकै मोर्चाका उत्पीडित जनताको ख्याल गर्न नचाहने नेता तपाईं हुनुहुन्छ भने हामी साधारण जनता तपाईंले जनताप्रति गरेका ती पुराना वाचा तपाईंबाट पूरा होला भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौं ? कृपया जवाफ हामीलाई दिनुहोस् । तपाईंका चुनावी प्रकरण र राजनीति प्रणाली धेरै महँगो भयो ।
जनताको सही प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुप¥यो । राजनीतिमा दण्डहीनता हुनै नसक्ने विधिहरू ल्याउन सक्नुप¥यो । धेरैजसो जसो जनताले अझै पनि संघीय लोकतन्त्र भनेको के हो ? त्यसको आवश्यकता बुझ्न सकिरहेका छैनन् । सुतिरहेका जनतालाई उठाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । नेताहरूका अहिलेका अवस्थामा राजनीति नै पेसा भइरहेको छ । ठेक्कापट्टा, कमिसन, व्यापार र देशको भूमि अवैध कब्जा गर्ने आदि काम धेरै नेताबाट भइरहेका छन् । सो रोक्नुपरेको छ ।
यी सबै कुराको तपाईं आफंै ज्ञाता हुनुहुन्छ । राजनीति लाई यसरी खेलबाड गरी देश सिंगो डुब्न लाग्दा पनि किन होस नआएको ? तपार्इंकै एजेन्डाअनुसार नश्लीय सोचबाट अलग पहिचानसहित संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रामक, समानुपातिक, समतामूलक शासनप्रणाली हामी चाहन्छौं । तपाईं आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ ? जनता जान्न चाहन्छन् ।
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्न्यास लिने घोषणा गरेका छन् । उनले क्रिकेट यात्रामा साथ, समर्थन, माया र...
सम्झनाका हत्यारालाई फासीको माग गर्दै कालिकोटमा विरोध प्रदर्शन
कालिकाट । बझाङको मष्टो गाउँपालिका –२ की १२ बर्षीया बालिका सम्झना कामीलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने हत्यारालाई फासीको माग गदै कालिकोटमा विरोद्ध प्रर्दशन गरिएको...
नयाँ बिरामीको उपचार नगर्ने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको निर्णय
फेडेररले यो सिजन नखेल्ने
दुबईबाट फर्केका एकमा ‘एन्टीबडी पोजेटिभ’